Mabhuku anozvibatsira kwazvo
Mabhuku matatu akanakisa naRafael Santandreu
Iwo mabhuku ari kutsvaga icho chaicho chakanaka anogara achimutsa kusahadzika kunyangwe mune avo vanonyorera iyi posvo. Zvinotaridza kuti kusada kunouya kubva mukududzirwa kwebhuku rerudzi urwu sekupinda muzvirongwa zvavo, kana kuzvipira, kufungidzira kwekukundwa ...
Pasina kutya, naRafael Santandreu
Kutya kwedu kwakasarudzika, pasina kukahadzika. Chaizvoizvo zvese zvakaverengerwa, izvo zvakanaka nezvakaipa. Uye mugwagwa wakasarudzika chiuno kuseri neshure. Nekuda kwemanzwiro isu tinoita zvemukati kunzwa kwemuviri. Uye kubva kune iyo isinganzwisisike kunzwa iyo yatinozvigadzira isu, kubva mukutya, tinogona kusvika ku ...
Kufema naJames Nestor
Zvinotaridza kuti isu tinogara takamirira kuti mumwe munhu atizungunze zvakaoma mukuziva kuti ati: gehena, angave akarurama! Uye zvinoshamisa, chikonzero chakakurumbira, chokwadi chisingapindurike ndicho chinoratidzwa kwatiri nekujeka kwezviri pachena. James Nestor akazvitora ...
Bhuku rako rinokurudzira. Vandudzwa nechivimbo chakazara
Mhedzisiro yenyaya yacho ndeyekuti mumwe nemumwe aive nemafungire seanosarudza mbatya mangwanani ega ega (kana zuva rakapfuura mune yekufanoona zvakanyanya uye kudzora nguva yavo). Asi iri chaizvo mhando yerabyrinths uye zvemukati zvinokanganisa nekutendeuka zvinotungamira ku ...
Kubva pandakaverenga bhuku raAllen Carr rine mukurumbira pamusoro pekurega kuputa, kutenda kwangu mukubatsira kwemabhuku ekuzvibatsira kwakashanduka zvakanyanya kuita nani. Izvo chete nezve kutsvaga iro bhuku iro rinopa iyo noséqué yezano pakati pechaunga chekupokana chakasvika kubva pamuenzaniso ...
Kana Mugumo Wava Pedyo, naKathryn Mannix
Rufu ndirwo rwunobva kune ese anopokana anotitungamira kuburikidza nekuvapo kwedu. Nzira yekupa kuenderana kana kuwana kubatana kune hwaro hwehupenyu kana mhedzisiro yedu ikaparara sekuguma kwakaipa kwemufirimu? Ndipo panouya kutenda, zvitendero uye zvisingawanikwi, asi zvakadaro ...
Mutambi kubva kuAuschwitz, naEdith Eger
Handiwanzofarira mabhuku ekuzvibatsira zvakanyanya. Dzanhasi dzinonzi gurus ruzha sevanyepedzeri vekare kwandiri. Asi ... (kuita zvisaririra zvinogara zvakanaka kuti usapinda mune imwe pfungwa), mamwe mabhuku ekuzvibatsira kuburikidza nemuenzaniso wavo, anogona kugara achifadza. Ipapo kunouya maitiro e ...
Iyo Bindu reMoyo Wako, naWalter Dresel
Zvagara zvichitaurwa kuti nzira yechokwadi yekumufaro ndeye iyo inopfuura nekuzviziva-ruzivo. Chete, ngatiregei kuzvinyengera, pazviitiko zvakawanda isu takatarisana neyega isingapedze kubvisa chifukidzo chemisangano, tsika, maitiro uye zvese zvinokombamira ...